KUTHENI LE NTO UJEREMY RENNER ENGAZANGE ABUYE UKUSUKELA KWI-ROGUE NATION MISSION: AYINAKWENZEKA I-7 - IIMUVI
Kumishini: Iprotocol ye-Ghost engenakwenzeka, sabona uJeremy Renner njengoWilliam Brandt, ecaleni kukaTom Cruise njengoEthan Hunt, uSimon Pegg, uPaula
Kwi-Mission: I-Protocol engenakwenzeka-iMoya, sabona uJeremy Renner njengoWilliam Brandt, ecaleni kukaTom Cruise njengoEthan Hunt, uSimon Pegg, uPaula Patton, uMichael Nyqvist, uAnil Kapoor, kunye noLéa Seydoux.
Njengoko enye i-cast ekhankanyiweyo iqhubeka iphinda ivela kwi-franchise kodwa abalandeli basalinde ukujonga okukodwa kwabo bakuthandayo uJeremy Renner.
Umboniso bhanyabhanya uphume ngo-2011 kwaye ngoku xa wonke umntu esengaphakathi kwamakhaya abo ngo-2020. Abalandeli abananto yakwenza nento ngaphandle kwabadlali babo ababathandayo kunye nokungabikho kwabo kuthotho lweentandokazi.
Ewe, sonke siyamazi uTom Cruise kunye nokuzimisela kwakhe ngokugqibeleleyo. Uyaziwa ngesenzo sakhe kwimiboniso bhanyabhanya, kwaye wenza nemikhwazo yakhe yedwa. Ewe, wayefanele ukuba aqale ukudubula iMishini: Akunakwenzeka i-7, kodwa ngenxa yobhubhane, akakwazanga.
isherlock bbc ixesha lesi-5
UTom Cruise ayinguye owayehlala ekhaya engenzi nto ngexesha lokuvalelwa yedwa. Ngelixa sonke sikruqukile kwaye sisokola ukukhangela umdlalo, uKhenketho ebesebenzela isenzo esixineneyo!
Ngaba uTom Cruise uphumle ngeli xesha?
Ngokwengxelo zamva nje, ukuhamba ngenqanawa ngenqanawa kulisebenzisa kakhulu eli xesha lokuvalelwa lodwa. Urente isiqwenga somhlaba e-Oxfordshire kumfama. Kwaye usebenzisa lonke ixesha lakhe kuqeqesho lokulandelelana kwamanyathelo kwimiboniso bhanyabhanya ezayo. Ebekhwele iibhayisekile kunye neehelikopta ukuzilungiselela.
Kwangoko kulenyanga, wayekhwele isithuthuthu sakhe esibomvu kwiindawo ngeendawo. Kwaye unelayisensi yakhe yokuqhuba ukusukela ngo-1994, kwaye uyazihlaziya ngendima.
Kutheni le nto uJeremy Renner engabuyeli kwi-franchise?
Xa uJeremy weza kuthotho, wayeyaziwa njengemlingisi enamagama amabini atyunjwe nguOscar egameni lakhe. Ikamva elinomtsalane phambi kwakhe njengoko wayezakudlala iHawkeye kwiMarvel Cinematic Universe.
URenner utyikitye kwizikhundla eziphezulu ezibizwa ngokuba zii-franchise kolu shishino ezenza ukuba kuphumelele ukuthanda kwakhe.
Njengokuba, ngelo xesha, Ababuyisi Sixhiba kwakusele unyaka kude, ke kwakukhangeleka ngathi yonke into izokusebenza kakuhle.
UMlawuli uChristopher McQuarrie uchaze le meko:
UJeremy wayenokuzibophezela kwakhe kwiAvengers, nto leyo eyothusayo bagqibela ngokungazilolongi, kwaye sasingazi ukuba yintoni [iMishini yesithandathu: Ayinakwenzeka] imovie, ngoko besingakwazi ukubonelela ngeshedyuli. Sasifuna inkululeko epheleleyo. Ngelishwa into kaJeremy kukuba wayexakekile kwesi saqhwithi sigqibeleleyo, umntu akanakukusebenzisa kwaye omnye akazi ukuba enze njani, ngenxa yobunzima obukhulu ababenabo ngeAvengers.
UTom Cruise Ufumene imvume ekhethekileyo yokuDubula ngaphakathi kwexesha lokuvalelwa?
Nangona kunjalo, asazi ukuba ukudubula kweMishini: akunakwenzeka i-7 kuya kuqhubeka kwakhona. Kodwa iqela lifumene imvume ekhethekileyo ku-Oliver Dowden, uNobhala weNkcubeko wase-Bhritane, ukuba adubule.
Abasebenzi banegunya elikhethekileyo elibavumela ukuba baphephe ixesha lokuzihlukanisa iintsuku ezili-14.
Kwakhona, ezinye iingxelo zitsho ukuba i-Cruise isebenza ngurhulumente wase-UK ukuqinisekisa ukhuseleko lweqela lakhe ngexesha lokudubula.
usapho lomfo upeter
Ngapha koko, iMishini: Akunakwenzeka ukuba i-7 iqale ukudubula e-Italiya ngoFebruwari walo nyaka.
Kodwa njengoko imeko yayiwohloka, ihlumelo laba yinto engenakwenzeka. Kwakhona, iqela kuye kwafuneka lirhoxe.
Fomr apho baya eSurrey, kodwa ke ngo-Matshi, ukuveliswa kuyekile.
Ukuza kuthi ga ngoku, iMishini: engenakwenzeka i-7 izakukhutshwa ngo-Novemba 19, 2021.
Masithembe nje ukuba siza kubona uJeremy Renner wethu esimthandayo kwakhona kule franchise.
ixesha lokugqibela lobukumkani 2 ukukhutshwa kwe-Netflix
Indoda enye yenqindi ye3 ukukhululwa
iphuma nini i-movie entsha
Ubukumkani betv show season 3
ekhaya ngaphambi kwexesha elimnyama 3
Umtyholi lixesha lesithuba sesi-2 sokukhutshwa